Nhau - CONVISTA Yakagadzira iyo Parallel Slide Gate Valve yeepakati nepakati pombi yekumanikidza mapaipi e600 kusvika 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit steam turbine
CONVISTA Yakagadzira iyo Parallel Slide Gate Valve yepamusoro uye yepakati kumanikidza pombi masisitimu e600 kusvika 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit steam turbine
Muna Nyamavhuvhu wegore ra2018, CONVISTA akabudirira kugadzira Parallel Slide Gate Valves epamusoro uye epakati kumanikidza pombi masisitimu e600 kusvika 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit steam turbine. Kubatsira kwechinhu ichi seinotevera:
1.It adopts kumanikidzwa kuzvidzora chisimbiso mamiriro, pamwe welded kubatana kumativi maviri.
2.It adopts yemagetsi yokunzvenga vharafu panguva Inlet uye nzira yokubudisa kuti BALANCInGialial kumanikidzwa panguva Inlet uye nzira yokubudisa.
3. Yayo yekuvhara mashandiro inotora yakafanana maviri-flashboard chimiro. Kuiswa chisimbiso kwevharuvhu kunobva pakudzvinyirira kwepakati kwete kubva kumabhureki emagetsi anoita kuti vharuvhu isatambura nekukakavara kune njodzi panguva yekuvhura nekuvhara kwayo.
4.Nekobalt-based solid rigid alloy build-up welding, kumeso kwekuisa chisimbiso kunoratidzira kupisa kwakawanda, kurwisa ngura, kuramba kweabrasion, hupenyu hurefu hwebasa uye mamwe maitiro.
5.Kuchipinda anti-ngura uye nitrogenization kurapwa, iyo vharuvhu pevhu inoratidzira yakanaka ngura kuramba, abrasion kuramba uye yakavimbika stuffing bhokisi kuvhara.
6. Inogona kuenderana neakasiyana epamba epamba uye ekunze zvigadzirwa zvemagetsi kusangana neDCS zvinodzora zvinodiwa uye nekuziva kure uye kwenzvimbo mashandiro.
7. Inofanirwa kuvhurwa zvizere kana kuvharwa panguva yekushanda. Haifanirwe kushandiswa seyakagadzika vharuvhu.